Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Shuruuda-Isticmaalka Qareennada Ganacsi Cannabis
Stumari, LLC. Shuruudaha isticmaalka
Wuxuu dhaqan galay laga bilaabo bisha Luulyo 11, 2018
Shuruudaha Adeegsiga oo Kooban
Si aad ugu habboon tahay, Stumari wuxuu soo bandhigayaa soo koobiddan Shuruudda Adeegga ee qaab kooban oo aan xirneyn iyo sidoo kale Shuruudaha Adeegsiga oo sharci ahaan ay ku adag tahay isla markaaba la soo koobo Shuruudda Adeegsiga. Fadlan fahanso in tani aysan ahayn duluc guud oo shuruudaha Isticmaalka Stumari; waa horudhac u ah xuquuqda iyo mas'uuliyadaha isticmaale ee muhiimka ah. Fadlan si taxaddar leh u aqri dukumentiga Isticmaalka oo dhan si taxaddar leh. Intaa waxaa sii dheer, fadlan la soco in adoo galaya ama adeegsanaya qayb ka mid ah websaydhkan Stumari, waxaad oggolaatay inaad ku xidhnaato Shuruuddayada Adeegsiga oo dhammaystiran isla markaaba la soo koobo Shuruudaha Adeegsiga Kooban. Haddii aadan ku raacsaneyn dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha Adeegyadeena oo dhammeystiran, ka dib uma adeegsan kartid websaydhka Stumari ama ma adeegsan kartid adeegyadeena.
Stumari waxay bixisaa goob loogu tala galay iskaashiga iyo wada xiriirka udhaxeeya xirfadleyda sharciga (“Users Users”) iyo isticmaaleyaasha raadinaya caawinaad sharciyeed (“Macaamiisha Sharciga”). Stumari ma ahan shirkad qaanuun, qareenka adeega qareenka ama wakaalada shaqaaleysiinta mana balanqaadeyso natiijooyinka. Fadlan u isticmaal Stumari si mas'uuliyad leh oo fadlan ka sii akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan adeeggeenna Qaybta 2 ee hoose.
Adiga ayaa mas'uul ka ah amniga akaawnkaaga, iyo dhamaan howlaha ka dhaca koontadaada. Fadlan ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mas'uuliyadaha isticmaalaha ee Qaybta 3 ee hoose.
Dhaqanka qaarkood, sida adeegsiga howlaha sharci darrada ah, looma oggola Stumari. Fadlan ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dhaqanka isticmaalaha Qaybta 4 ee hoose.
Waxyaabaha qaarkood, sida waraaqaha hanjabaada ah ama waxyaabaha ku xadgudba xuquuqda qof kale ee hantida aqooneed, looma oggola Stumari. Stumari waxay xaq u leedahay inay meesha ka saarto Mawduuca-ay soo saarto Macaamiisha ku xadgudba siyaasadahayaga. Fadlan ka sii aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Wax-Soo-Saarka Isticmaalaha Qeybta 5 ee hoose.
Shuruudo gaar ah oo gaar ah ayaa xukuma adeegsadayaasha lataliyayaasha Stumari. Tusaale ahaan:
La-taliyayaasha Adeegyadu maahan shaqaalaha ama wakiilka Stumari.
Xiriir qareen iyo macmiil lama sameysanayo Stumari, waajibna kuma ahan waajibaadka qarsoodiga, iyadoo la adeegsanayo websaydhka Stumari, oo ay ku jiraan dhejinta shaqooyinka.
Xiriirka qareenka-macmiilka waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo adeegga u dhexeeya Macaamiisha Sharciga iyo Adeegsadayaasha La-tashiga.
Isticmaalayaasha lataliyeyaasha ayaa mas'uul ka ah kaliya inay hubiyaan in macluumaad kasta, cabashooyinka, ama xayeysiisyada ay ku dhejiyaan websaydhka Stumari inay u hoggaansamaan dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta ku saabsan anshaxa mihnadda.
Stumari ma samayso wax dammaanad qaad ah oo ku saabsan awooda sharciga, kartida, ama tayada Isticmaalayaasha La-tashiga oo laga yaabo in lagu qoro Websaydhaheena
La-taliyayaasha Isticmaalayaasha waxay xor u yihiin inay abuuraan oo ay ku sii hayaan astaantooda websaydhada Stumari. In kasta oo Stumari uu sameynayo dadaallo macquul ah oo ganacsi si loo xaqiijiyo liisanka La-tashiga Isticmaalaha ku-dhaqanka sharciga, Stumari ma metelayso asalka La-Taliyaha La-tacaalihiisa ama aqoontiisa.
Isticmaalaha La-tashiga wuxuu noqon karaa “Adeeg La-Taliyaha La Xaqiijiyay” iyadoo la siinayo Stumari caddeyn dheeri ah oo ah inuu isagu ama iyadu yahay firfircoon, qareen shatiyeysan oo ku habboon inuu ku dhaqmo sharciga. Isticmaalayaasha La-Hubiyay ee Adeegsadayaasha sidoo kale waxay bixin karaan khidmad marin marin loogu helo adeegyo dheeraad ah ee Stumari iyo aaladaha maaraynta tababbarka. Stumari ma aqbalidoono mana soo jeedinayo Users lataliye waana mas'uuliyada saaran Macmiilka Sharciga inuu sameeyo taxaddar kahor inta uusan shaqaaleysiin La-Taliyaha La-shaqeynta sharciga.
Ma jiro wax qarash ah oo loogu talagalay Macaamiisha Sharciga inay ku dhejiso codsi shaqo Stumari ama ay adeegsadaan mid ka mid ah qalabka Stumari ee internetka ama dukumiintiyada. Adeeg ama khidmad la socodsiin (sida khidmadda kaarka deynta) waxaa lagu dalban karaa qaansheegyada lagu bixiyo Stumari.
Fadlan ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Isticmaalayaasha La-tashiga ee Qaybta 6 ee hoose.
Stumari wuxuu u hoggaansamaa qodobbada xayndaabyada badbaadada ee Millennium Digital Digital Milyannum. Haddii aad aamminsan tahay in agabyada ku xidhan ama ku xidhan Stumari ay ku xadgudbayaan xuquuqdaada daabacan, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad la socodsiiso Stumari iyada oo la raacayo Xeerka Xuquuqda Sanadka ee Millennium-ka Dijitaalka ah ee Stumari. Fadlan ka sii aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Stumari's DMCA's Policy qeybta 8 ee hoose.
Stumari ayaa kuu soo diri karta emayl iyadoo qayb ka ah adeeggeeda. Waad ka bixi kartaa isgaarsiinta emaylka. Fadlan ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan isgaarsiinta emaylka Qaybta 10 ee hoose.
Stumari wuu badali karaa shuruudahan waqti kasta. Si kastaba ha noqotee, Stumari ayaa kugu ogaysiin doonta isbeddelada agabka ee shuruudaha adoo ku dhejinaya ogeysiis deg deg ah iyo / ama u soo dir emayl cinwaanka emaylka aad u dhiibtay Stumari markii la diiwaangelinayo. Fadlan ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan wax ka badalida shuruudahan adeegsiga ee Qaybta 17 ee hoose.
Fadlan eeg Nidaamka Asturnaanta ee Stumari wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan xuquuqda isticmaalaha Stumari.
Fadlan ka fiiri shuruudaha oo buuxa wixii macluumaad dheeri ah.
Waad ku mahadsan tahay inaad u dooratay Stumari madal waayo-aragnimadaada sharciyeed. Shuruudaha Adeegga soo socdaa waxay xukumaan adeegsiga Adeegga oo dhan ee websaydhka ku yaal https://www.Stumari.co iyo dhammaan waxyaabaha ku jira, adeegyada, iyo waxyaabaha laga heli karo barta Websaydha. Waxaan fahansanahay in aqrinta shuruudaha aqrinta ay shaqad leedahay laakiin fadlan si taxaddar leh u aqri heshiiskan kahor intaadan isticmaalin Websaydhka Stumari. Waxay ka hadlaysaa nooca adeegga Stumari; xeerarka Stumari wuxuu ka rajeynayaa dadka isticmaala inay raacaan Boggeena internetka iyo adeeggeeda; xiriirka ka dhexeeya Stumari, adeegsadeyaashayada, iyo adeegsadayaasha lataliyayaasha; iyo faahfaahinta sharciga ee xukuma xeerarkan iyo cilaaqaadyadan. Sababtoo ah waa heshiis noocan oo kale ah oo noo dhexeeya annaga iyo adiga, adeegsadeyaashayada, waxaan isku daynay inaan ka dhigno mid cad oo adeegsade-saaxiibtinimo intii suurtogal ah.
Adigoo galaya ama adeegsanaya qayb ka mid ah Websaydhada, waxaad ogolaatay inaad ku xidhnaato shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan. Haddii aadan ku raacsaneyn dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan, markaa waxaa suuragal ah inaadan geli karin barta internetka ama adeegsan adeegyadeena midkood. Websaydhka waxaa heli kara oo keliya shakhsiyaadka ugu yaraan 18 sano jira.
Shuruudaha Isticmaalka Stumari
Qeexitaannada. Erayada soosocda waxaa loo isticmaalaa dhamaan Shuruudahan Isticmaalka waxayna leeyihiin macno gaar ah. Waa inaad ogaataa macnaha erey kasta.
Ereyga "Adeeg" waxaa loola jeedaa adeegyada ay bixiso Stumari, oo ay kujirto iyadoon la xadidin marin u helitaanka bulshada Stumari ee internetka; qalabka isgaarsiinta; maaraynta dukumiintiyada iyo xalalka kaydinta; iyo adeegyada lacag bixinta. Stumari ma bixiso adeeg gudbin qareen ama looma adeego wakaaladda shaqada. Waxaan u diyaarinay goob ay adeegsadeyaashu kula kulmaan oo ay macluumaadka isweydaarsiga la galaan Users Users.
Ereyga “Heshiis” (oo sidoo kale lagu soo koobi karo sida “Shuruudaha Adeeggan”) waxaa loola jeedaa, wadajirka, dhammaan shuruudaha, shuruudaha, iyo ogeysiiska ku jira ama lagu xusay qoraalkan.
“Websaydhka” waxaa loola jeedaa Stumari websaydhkeeda oo ku yaal https://www.Stumari.com, dhammaan qayb hoosaadyada iyo hoosaadka hoostiisa, iyo dhammaan waxyaabaha ku jira, adeegyada, iyo waxyaabaha laga heli karo Websaydhka ama bogga.
“Stumari,” “Annaga,” iyo “Annaga” waxay tixraacaan Stumari, Inc., iyo sidoo kale kuwa raacsan, agaasimayaasha, kaabayaasha, saraakiisha, iyo shaqaalaha. La-taliyayaasha Isticmaalayaasha qayb kama ahan Stumari.
“Isticmaalaha”, “Adiga” iyo “Adiga” waxaa loola jeedaa qofka, shirkadda, ama hay'adda soo booqatay ama isticmaaleysay Websaydhka iyo / ama Adeegga. Adeegsaduhu wuxuu noqon karaa macmiil sharci ah, Adeeg lataliye, labadaba, ama midna.
“Users lataliyeyaal” waxaa loola jeedaa adeegsadayaasha la taliyayaasha diiwaangashan ee qaybta sharciga ah ee laga yaabo inay la xiriiraan oo ay siiyaan qandaraas qandaraas ama shaqo la-talin Macaamiisha Sharciga ama Adeegsadayaasha La-tashiga Adeegga. La-taliyayaasha Adeegyadu maahan shaqaalaha ama wakiilka Stumari. Fadlan eeg Qaybta 6 ee Heshiiskan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Adeegga La-taliyayaasha.
“Macaamiisha Sharciga” waxaa loola jeedaa 1) Isticmaalayaasha soo gudbiya codsiyada soo jeedinta ka timaada Users Lataliyeyaasha si loogu bixiyo adeegyada sharciga lacag ("Shaqooyin"); iyo 2) Isticmaalayaasha qandaraas la qaata la taliyayaasha adeegsada shaqooyin dheeri ah, kuwaas oo, ujeeddooyinka Qaybta 7 ee hoos ku xusan, ay ka mid noqon karto shaqo joogto ah, oo ka baxsan shaqada hore ee aasaasay Xiriirka La-tashiga Macaamiis-sharci. Adeegsadayaasha La-tashiga waxay soo gudbin karaan soo-jeedinno ("Bandhigyo") shaqooyinkan oo kale oo sidoo kale waxay dhisi karaan shuruudo ku saabsan xiriirka lala yeelanayo Macmiilka Sharciga ah iyada oo loo marayo warqad hawlgal saxeexan ama heshiis kale oo qoraal ah. Fadlan eeg Qaybta 6 (b) wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan Shaqooyinka, Qandaraasyada, iyo Macaamiisha Sharciga ah
“Waxyaabaha” waxaa loola jeedaa waxyaabaha ka kooban ama lagu soo bandhigay Websaydhka, oo ay ku jiraan iyadoon qoraalku xaddidnayn, dukumiintiyo, macluumaad, xog, maqaallo, aragtiyo, sawirro, sawirro, sawiro, kumbuyuutar, barnaamijyo, duubis fiidiyoow ah, cajalado maqal ah, codad, naqshado, astaamo, iyo agab kale oo laga heli karo Websaydhka. Waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah, iyada oo aan la xadidin, Agabka Isticmaalaha Isticmaalaha, kaas oo ay soo gudbin karaan isticmaale kasta oo Stumari ah (Adeeg Macmiil ama Adeeg La-talin)
Ku saabsan Adeegga Stumari.
Adeegga Stumari waa goob loogu talagalay wada-shaqeynta iyo isgaarsiinta ka dhexeysa xirfadlayaasha sharciga iyo kuwa raadinaya kaalmada sharciga. Adeegga Stumari wuxuu siiyaa marin u adeegsiga bulshada casriga ah ee Stumari ee Adeegsadayaasha La-tashiga xirfadeedka leh; wadashaqeyn fudud oo loo maro aaladda maaraynta isgaarsiinta Stumari; maaraynta dukumiintiga iyo kaydinta; iyo sahlan, lacag bixin aamin ah iyo aaladaha qaansheegashada.
Stumari Ma ahan Xaqiijin Sharci. Stumari ma bixiso wakiil sharci. Stumari ma bixiso talo bixin sharciyeed, ra'yi sharciyeed, talooyin, tixraacyo, ama latalin. La-taliyayaasha Adeegyadu maahan shaqaalaha ama wakiilka Stumari. Stumari kuma lug laha heshiisyada u dhexeeya Users ama metelaadda Users. Marna Stumari looma qaban karo mas'uuliyadda ficillada ama ka-tagista xubin kasta oo lataliye ah oo adeegyadda latalinta ah kuu qabta.
Stumari Maaha Adeeg Gudbinta Qareenka ama Hay'adda Shaqada. Stumari ma ahan adeega gudbinta qareenka ama wakaalada shaqada. Stumari ma doorto ama ma oggolaanayo Adeeg-bixiye La-taliye shaqsi oo u adeegaya macmiilka Sharciga ah. In kasta oo Stumari adeegsanayo dadaallo macquul ah oo ganacsi si loo xaqiijiyo in La-taliyayaasha Isticmaalayaasha diiwaangashan ay yihiin qareenno shatiyeysan, ma sameynno wax dammaanad qaad ah, dammaanad qaad ah, ama wakiilnimo ah xagga awoodda sharciga, kartida, tayada, ama u-qalmidda Adeeg kasta La-taliye. Stumari ma ballanqaado ama dammaanad kama qaado in La-tashiga Isticmaalayaasha ay ku jiraan caymiska mas'uuliyadda xirfad-yaqaanimo. Stumari wuxuu ku dhiiri galinayaa Macaamiisha Sharciga inay baaraan isticmaale kasta oo lataliye ah ka hor intaadan aqbalin talooyinka xirfadeed.
Stumari uma turjunto mid kamid ah adeegsadeyaasheeda. Stumari waxay si fudud u siisaa meel ay kuwa doonaya caawimaad sharciyeed ay kula xiriiri karaan oo ay ula macaamilaan xirfadlayaasha sharciga. Stumari ma aqbalidoono mid ka mid ah adeegsadayaasha lataliyaasha mana cayimaan hadalada xayiraada ay la taliyayaashu adeegsadaan barta. Stumari ma metelayso qaddarinnada ku saabsan shuruudaha bixiyeyaasha adeegga sharciga aan qareenka ahayn.
Stumari Maaha Natiijooyinka Dammaanad qaadista. Waqti ka waqti, Macaamiisha Sharciga waxay soo gudbin karaan dib-u-eegisyada Isticmaalayaasha La-tashiga; dib-u-eegidani ma aha dammaanad, dammaanad, ama saadaalin laxiriirta natiijada wixii sharci sharci ah mustaqbalka. Stumari mas'uul kama aha ama mas'uul kama aha nooc kasta oo ka mid ah Waxyaabaha Ay Soo-Saarrato Macaamiisha ama talo sharciyeed ah oo aad kala kulanto shabakadda ama websaydhka, iyo isticmaal kasta ama ku tiirsanaanta Waxyaabaha Ay Soo-saartey Macaamiil ama talo sharciyeed ayaa keli ku ah halistaada.
Isticmaalka Stumari Ma Abuuro Xiriir Xeer-Ilaaliye Macmiil La leh Stumari. Stumari ma bixiso talo sharci ama adeegyo. Isticmaal kasta oo Adeegga Stumari loogu talagalay ama loogu talagalay ma abuuro xiriir qareen iyo macaamil. Wadahadal kasta oo loo maro Stumari looma qarin karo qarsoodi. Stumari mas'uul kama aha ficillada ama iska-dhaafka qof kasta oo lataliye ah oo adeegsanaya adeegyada latalinta ee adiga kugu saabsan.
Masuuliyadaha Isticmaalaha. Adiga, iyo adiga keligaa, ayaa mas'uul ka ah akaawnkaaga iyo wax kasta oo dhaca inta lagu gudajiro ama la adeegsanayo akaawnkaaga. Amnigaagu waa masuuliyadaada.
Amniga Koontada Isticmaalaha. Haddii aad iska diiwaangeliso Adeegga, waxaad abuuri doontaa koonto shaqsiyeed oo ay ku jiraan adeegsi gaar ah iyo eray sir ah si aad u gasho Adeegga oo aad uga hesho farriimaha Stumari. Adiga ayaa mas'uul ka ah dayactirka amniga koontadaada, oo waxaad si buuxda mas'uul uga tahay dhammaan howlaha ka dhaca koontada iyo wixii talaabo ah ee kale ee la xariira koontada. Waxaad ogolaatay inaad isla markiiba Stumari ogeysiiso adeegsiga koontada oo aan la fasaxin, ama wixii kale ee jabinta amniga ah. Annagu mas'uul kama noqon doonno mas'uuliyad bixinno kasta, khasaare, ama waxyeelo ka timaadda isticmaalka rukhsad u ah kombuyuutarkaaga, aaladda gacanta, ama aaladda kale ee xisaabinta iyo / ama koontada. '
Xiriirka lala Leeyahay Users lataliyeyaasha. Sababtoo ah ma dammaanad qaadi karno jiritaanka mid ka mid ah Adeegyaga La-taliyayaasha ee baahiyahaaga gaarka ah, waxaan ku dhiirrigelinaynaa Macaamiisha Sharciga inay baartaan Adeeg-bixiye kasta ka hor intaadan aqbalin talo-bixin xirfadle. Macaamiisha Sharciga ayaa waliba codsan kara heshiis heshiis sharci oo qoraal ah oo qeexaya shuruudaha, baaxadda, xaddidan, iyo shuruudaha wakiilnimada.
Ku Kalsoonidu Ma Ahaan Macluumaadka Loogu Tala-Galay Adeegsiga Mawduuca-Soo-saarta Adeeggan ee lagu dhajiyay Websaydhka, sida dhejinta mareegyada, ayaa loo bixiyaa ujeeddooyin macluumaad oo keliya, iyada oo aan la hubo in Waxyaabaha Ay Soo-Saarradiisu Tahay mid run ah, sax ah, ama sax ah. Waxyaabaha Ay Ka Kooban Tahay Macaamiilku ma aha beddelitaanka talo sharciyeed xirfadeed ama codsi si loo bixiyo talo sharciyeed ku saabsan xaqiiqooyinka gaarka ah. Waa inaadan daahin ama aadan sii ogeyn raadinta talo sharciyeed ama iska iloobin talobixin sharciyeed oo xirfadle ah kuna saleysan Waxyaabaha Ay Ka-Bixsan Tahay. Daahitaanka raadinta talo bixinta sharciga noocan ah waxay dhalineysaa in lagaa dhaafo wixii sheegasho ah ee aad lahaan karto, taas oo ku xirnaan doonta qawaaniinta (yaasha) xaddidaadda. Waxyaabaha Isticmaalaha-Macaamilay ma nidaamiso gobol ama urur kasta oo qareen ah.
U hogaansanaanta Sharciyada. Waxaad matasho oo damaanad qaadaysaa in: (i) aad awood u leedahay inaad tahay, oo aad ku jirtid da'da sharciga ah ee awoodaada ah inaad, naftaada ku xidho heshiiskan; (ii) Adeegsigaaga Adeeggu wuxuu ku koobnaan doonaa oo keliya ujeeddooyin uu oggolaaday Heshiiskan; (iii) adeegsigaaga Adeegga kuma xad-gudbi doono ama ma khaldami doono xuquuqda hantida aqooneed ee qolo kasta saddexaad; iyo (iv) isticmaalkaaga Adeeggu wuxuu u hoggaansamayaa dhammaan sharciyada maxalliga, gobolka iyo federaalka, qawaaniinta, iyo qawaaniinta, iyo dhammaan siyaasadaha kale ee Stumari.
Isticmaal iyo Samee Xadidyo. Waxaa laguu oggol yahay inaad isticmaasho adeegga illaa intaad raacayso xeerar aasaasi ah. Xaddidaadaha Isticmaalka soo socda iyo Xaddidaadaha Dhaqanka ayaa ah xeerarka aasaasiga ah ee aan ka fileynno inay adeegsadayaashu raacaan inta ay Adeeggan adeegsanayaan. Annagu mas'uul kama nihin waxyaabaha ay isticmaaleyaasheena ku dhajistaan, waxaanna xaq u leennahay xiritaanka akoontiga hadaan u baahanahay.
Waxyaabaha La Mamnuucay. Waxaad ku raacsan tahay inaadan soo gudbin doonin duruuf kasta oo jirta (oo ay kujirto softiweer, qoraal, sawirro, ama macluumaad kale) taas
waa sharci darro ama wuxuu dhiirrigeliyaa howlo sharci darro ah
magacyada, kadeedinta, xadgudubka, hanjabaada, ama u horseedo rabsho qof kasta ama koox kasta
iii. waa mid qaawan, midab takoor ah, ama haddii kale dhibaateyn ama cabsi gelin shaqsi ama koox ku saleysan diinta, jinsiga, nooca galmada, sinjiga, qowmiyadda, da'da, ama naafanimada.
waa spam, waa mashiin ama si aan kala sooc lahayn, waxay ka kooban tahay xayeysiis aan la fasaxin ama aan la oggoleyn, waraaqo silsilad ah, nooc kasta oo kale oo sharci darro ah, ama nooc kasta oo bakhtiyaanasiib ama khamaar;
waxaa ku jira ama rakibista wixii fayras ah, dirxi, fayras, fardaha Trojan, ama waxyaabaha kale ee loogu talagalay ama loogu talagalay in lagu carqaladeeyo, waxyeelo loo galiyo ama la xadido ku shaqeynta barnaamij kasta oo softiweer ah, aalad, ama qalab isgaarsiineed ama si loo waxyeeleeyo ama loo helo marin rukhsad ah ee xog kasta ama macluumaad kale ee dhinac saddexaad kasta;
ku xad-gudub xuquuq kasta oo lahaansha ah oo dhinac kasta ah, oo ay kujirto patent, astaan ​​ganacsi, sirta ganacsiga, xuquuqda daabacaada, ama xuquuqda kale
vii. ka dhaadhicinaya qof kasta ama xubin kasta, oo ay ku jiraan mid ka mid ah shaqaalaheenna ama wakiillada; ama
viii. wuxuu ku xadgudbayaa asturnaanta cid saddexaad.
Isticmaalayaashu waa inay ka weynaadaan da'da 18. Waad metelaysaa inaad ka weyn tahay 18 jir Stumari ma bartilmaameedsadeyso Mawduucayaga carruurta ama dhalinyarada ka yar 18, mana u oggolaanayno Users ka yar 18 jir Adeegyadeena. Haddii aan wax ka baranno isticmaale kasta oo ka yar da'da 18, si dhakhso ah ayaan u joojineynaa akoontada Adeegsiga.
Khasab kuma aha Isdhaxgalka Macaamiisha; Stumari May Kormeerka Isdhaxgalka. Wixii masuuliyad ah, khasaaro ama waxyeelo ah ee ka dhasha is dhexgalka Macaamiil kasta, oo ay ku jiraan, iyadoon la xadidin, Xaashida Shaqooyinka, ee aad soo geliso ama ku hesho adeegsiga Adeegga ayaa kaligeed mas'uul ka ah. Go'aan qaadashadayada, annaga, ama tikniyoolajiyadda aan adeegsanno, waxaa laga yaabaa inaan la socono oo / ama duubno is-dhexgalkaaga guud ee Adeegga, in kasta oo aan si gaar ah loo qeexin is-dhexgalkaaga sharciyeed.
Xaquuqda Joojinta Xisaabaadka. Waxaan xaq u leenahay (in kasta oo aan waajib ku aheyn) in, go'aankeenna kaliya, aan go'aan ka gaarno haddii dhaqan kasta ee Isticmaalaha uu ku habboon yahay iyo inuu u hoggaansan yahay Shuruudahan Isticmaalka, ama joojinayo ama u diidi karo marin u helka iyo adeegsiga Adeeggan Macaamiil kasta Sababta, oo leh ogaysiis hore ama aan lahayn.
Nuxurka Isticmaalaha-Isticmaalaha Adiga ayaa iska leh nuxurkaaga, laakiin waad noo ogolaatay xuquuq gaar ah taas, si aan u soo bandhigo una wadaagno waxa aad soo dhejiso. Waxaan xaq u leenahay inaan ka saarno waxa ku jira haddii aan u baahanahay.
Masuuliyadaha Wax-Soo-Saarka Macaamiisha. Waad abuurikartaa waxa ku qoran, qoran ama si kale ah, inta aad adeegsaneyso Adeegga (“Ka-faaiidaystaha Waxyaabaha Ay Soo-Saarrato"). Adiga keliya ayaa mas'uul ka ah waxa ku jira, iyo wixii waxyeelo ah ee ka dhasha, Wax kasta oo Wax-Soo-Saaris ah ee Adeegga ah oo aad dhejiso, geliso, kuxiriso ama haddii kale aad ku soo bandhigto Adeegga, iyadoo aan loo eegin nooca nuxurkaas. Wixii masuuliyad ah, khasaaro ama dhaawac ah oo dhaca iyada oo ay sababtu tahay adeegsiga waxkasta oo Ma-abuur leh ee aad adigu soo bandhigto ama aad marin ugu hesho isticmaalka Adeegga ayaa kaligeed mas'uul ka ah. Annagu mas'uul kama tihin wixii soo bandhigid dadweyne ama si xun u isticmaal ah Agabka Isticmaalaha.
Xuquuqda Dhajinta. Waxaad matasho oo damaanad qaadeysaa inaad xaq u leedahay inaad dhejiso dhamaan waxyaabaha Kujira-Soo-saaray ee aad soo dirto. Gaar ahaan, waxaad u baahantahay inaad si buuxda u raacday shati kasta oo dhinac saddexaad ah ee laxiriira Waxyaabaha Ay Ka-Bixsan Tahay Macaamiisha, oo aad qaadatay dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah inay ka gudbaan soo afjaridda isticmaaleyaasha shuruudo kasta oo loo baahan yahay.
Stumari ayaa Wax ka Badaalin Karta ama Ka Saar Karta Waxaan xaq u leenahay (in kasta oo aan waajib ku aheyn) in, go'aankeena kaliya, aan go'aan ka gaarno haddii ama ay ka kooban yihiin Waxyaabaha Ay Ka-Bixsan Tahay Adeegga Ay Ku habboon yihiin oo ay u hoggaansan yihiin Shuruudahan Isticmaalka, ama aan diidno ama meesha uga saarno Wax kasta oo Maqaal ah , ku xad-gudubtaa wixii siyaasad Stumari ah ama si kasta ha noqotee waxyeelo, aan habooneyn, ama wax diidmo ah. Stumari wuxuu kaloo xaq u leeyahay inuu sameeyo qaabaynta iyo tafatirka oo uu beddelo qaabka Wax kasta oo Wax-u-Kordhiisu uu ku soo bandhigo Websaydhka.
Lahaanshaha Maaddada La Isticmaaley-Isticmaalaha Marka laga reebo Waxyaabaha ka soo baxa Stumari, ma sheeganayno lahaanshaha wax kasta oo la soo gudbiyey, la keydiyey, ama lagu sameeyay akoonkaaga. Waxaad dhawri doontaa dhammaan lahaanshaha, xakamaynta, iyo mas'uuliyadda Macluumaadka-Ku-saleysan Adeegga aad dhejiso. Waxaad u xakameyn kartaa marin u helista Maqaalkaaga-uu ku Kordhiyay Macaamiishaada iyada oo loo sii marayo dejimaha akoonkaaga isticmaale.
Deeqda laysanka. Si kali ah si loogu oggolaado Stumari inuu isticmaalo Adeegga aad ugu shubto Adeeg si macquul ah adigoon ku xadgudbin wax xuquuq ah oo aad ku dhex leedahay, waxaad na siineysaa xuquuqda soo socota: adoo ku soo dhejinaya waxkasta oo mareeg ah barta internetka, waxaad si cad u siineysaa Stumari iyo ku-xigeenadeena aag caalami ah, lasii gudbin karo, buuxa -iyo lacag bixin iyo boqornimo-la'aan, iyo liisanka aan goonida u lahayn in la isticmaalo, dib loo isticmaalo, la muujiyo, wax laga beddelo, la qabqabsado, la qaybiyo, loona qabto wax ku saabsan ujeeddada ganacsi ee Stumari. Ruqsadani ma siineyso Stumari xuquuqda ay ku iibinayso Maaddada loo Adeegsan Karo ama haddii kale ku baahiso meel ka baxsan Websaydhaheena. Ruqsadani waxay joogsan doontaa waqtiga marka Maaddada laga saaray Websaydhka.
Users lataliye. Adeegsadayaasha La-tashiga waa xirfad-yaqaanno madax-bannaan oo madax-bannaan oo bixiya adeegyo la-talin ah ee loogu talagalay Macaamiisha Sharciga ee mustaqbalka. Iyagu maahan Stumari.
Xiriir Malaha Xiriirka Qareenka iyo Adeegsiga Adeegsiga Websaydhka. Isticmaalka Websaydhada Stumari ma abuuri karaan xiriir qareen macmiil la-tacaaliyeyaasha Isticmaalayaasha. Macluumaadka la soo dhejiyay ama lagu sameeyay ama laga helo websaydhka, oo ay ku jiraan, iyadoon la xadidin, wax jawaab ah oo laga qabo su'aalaha sharciga ah ee lagu dhajiyay Websaydhka; macluumaadka Tilmaamaha Stumari iyo Dukumiintiyada; macluumaadka si cad loogu soo daabacay Websaydhka; ama macluumaadka loo diro farriin aan la weydiisaneyn loo-shaqeeyaha looguma talagalin talo sharci, ma ahan sir, mana abuuro xiriir qareen iyo macaamil. Waxaa loo qaddariyo Wax-U-Kordhi Mawduuca.
Xiriirka Qareenka iyo Adeegga Adeegga. Xiriirka qareenka-macmiilka waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo Adeegga u dhexeeya Adeegsadayaasha iyo La-taliyayaasha Adeegga oo keliya. Macaamiisha sharciga ah waxay ku dhejin karaan Shaqooyinka Adeeggan. Adeegsadayaasha La-tashiga waxay soo gudbin karaan Qandaraasyada oo ay ka xaajoodaan faahfaahinta Shaqooyinkan ka hor oggolaashada. Marka la oggolaado, baaxadda wakiil matalaya La-Taliyaha Wakiilka ayaa si adag ugu xaddidan arrinta lagu heshiiyay Qandaraaska haddii Macaamiil Sharci ah iyo La-Taliyaha La-tacaalku marka dambe u sharciyeeyo qaban-qaabadooda iyada oo loo marayo warqad hawlgelinta la saxiixay ama heshiis kale oo qoraal ah, oo kiis ahaan heshiiskii ugu dambeeyay ee qoran uu noqon lahaa. ka hormari soo jeedinta horay loo aqbalay. Bilaashku ma aha beddel ujeedka qof ahaanta ah ama la tashiga taleefanka qareen shati u leh inuu ku dhaqmo awoodaada sharci ee ku saabsan arintaada qaaska ah ee sharciga, waana inaadan ku tiirsanaan macluumaadka kujira Bilaashka sidii talo sharciyeed. Stumari waxay qaadataa dadaal kasta oo macquul ah si loo xaqiijiyo asturnaanta qandaraasyada iyo farriimaha kale ee shaqsiyeed ee Adeegyadeena, laakiin ma dammaanad qaadi karto sirta. Isgaarsiinta u baahan sirta waa in lagu qabtaa meel ka baxsan Adeegga Stumari, sida khadka taleefanka.
Masuuliyadaha Isticmaalaha. Isticmaalayaasha La-tashiga ayaa kaliya mas'uul ka ah inay hubiyaan in macluumaad kasta, codsiyo, ama xayeysiis ay ku dhajiyaan ama dhigayaan Websaydhka, oo ay ku jiraan iyadoon la xaddidneyn Agabka Isticmaalaha-Macluumaadka, iyo wixii xiriir ah ee ay la yeeshaan macaamiisha mustaqbalka leh ee Websaydha ama Adeegga, inay si buuxda u hoggaansamaan dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta ku habboon dhaqanka, ay ku jiraan kuwa quseeya ku dhaqanka sharci darrada ah ee sharciyeynta iyo kuwa hagaya qaabka, qaabka ama waxyaabaha ku jira wada xiriirka macaamiisha, xayeysiinta, ama arrimo kale.
Bixinta Isticmaalayaasha La-tashiga. Shuruudo gaar ah ayaa xukuma Users lataliyeyaasha iyo lacag bixinta.
Stumari Maaha Xisbi Lagu Heshiri karo. Macaamiisha Sharciga ayaa lagala xiriiri karaa La-taliyayaasha Adeegsiyada iyadoo la adeegsanayo dhajinta iyo aqbalaada Shaqooyinka. Qandaraasyada noocan oo kale ahi waxay udhaxeeyaan Macmiilka Sharciga ah iyo Adeegsiga La Taliyaha. Stumari xubin kama noqon doonto qandaraas kasta oo ku saabsan Shaqooyinka loo soo gudbiyay Adeegyadeena, haddii aan sarkaalka Stumari soo dhejin. Stumari wuxuu fududeeyaa qandaraasyadaas isagoo siinaya qalab loogu tala galay maaraynta isgaarsiinta iyo aaladaha lacag bixinta.
Dhammaan Khidmadaha Sharciga ah Waxaa La Siiyaa Loogu Talagalay Isticmaalayaasha. Stumari ma bixiso adeegyo sharciyeed mana bixiso khidmadda adeegyada sharciga. Lacag bixinada la siinayo isticmaaleyaasha lataliyeyaasha iyadoo loo marayo boosteejada qaansheegadka Stumari waxaa si toos ah loogu gudbiyaa koontada bixiyaha lataliyaha lacag bixinta, wax ka yar adeeg kasta oo la xiriira iyo khidmadaha kaararka (sida khidmadaha kaarka deynta).
iii. Adeegsadaha La-taliyayaasha ah waxay ku heli doonaan Lacag Bixinta Adeeggan Dhammaan Macaamillada Macaamiisha. Isticmaalayaasha la taliyayaasha ee hela shaqooyinka loo maro Adeegga waxay heli doonaan lacag bixin iyadoo la adeegsanaayo dhammaan macaamillada la xiriira adeegsadahaas, oo ay kujiraan macaamil ganacsi ee xigga oo aan lagamamaarmaan aheyn Job hore. Haddii Macaamil Sharci uusan rabin ama uusan awoodin inuu ku bixiyo lacagta iyada oo loo marayo Stumari, La-Taliyaha La-tashiga wuxuu oggolaaday inuu u wargaliyo Stumari wixii heshiis lacag-bixin cusub ah. Bixinta Macaamiil Sharciga ah ee La-Taliyaha La-tashiga, oo lagu sameeyo adeegga ka baxsan adeegga iyada oo aan la ogeysiin hore loo siinin Stumari, waxay ka dhigan tahay tanaasulid buuxda labada dhinac ee dammaanadda bixinta Stumari / ilaalinta iska-horimaadka sida looga wada hadlay Cutubyada 14 iyo 15 ee hoose, xitaa sida laga yaabo inay la xiriiraan wixii ka horreeyey lacag-bixinnada lagu sameeyo adeegga dhexdiisa.
Koodhadhka Xayeysiinta ah iyo Dhibcaha. Stumari ayaa laga yaabaa, iyada ikhtiyaarkeeda u gaarka ah, inay abuurto koodhadh xayeysiis ah oo dib loogu soo celin karo kaydka koontada, ama astaamaha kale ama faa'iidooyinka la xiriira adeegyada La-tashiga Isticmaalaha, iyadoo la raacayo shuruudaha soo socda iyo shuruudo kasta oo dheeraad ah oo Stumari ku aasaasayo iyada oo loo eegayo qaab koodhka xayeysiinta ( “Koodhadhka Xayeysiinta”. Shuruudo gaar ah ayaa xukuma Users lataliyeyaasha iyo lacag bixinta.
Adeegsiga Koodhadhka Dallacsiinta Macnaheedu maahan Xiriirka Qareenka iyo Macmiilka. Waqti ka waqti, Macaamiisha Sharciga ayaa laga yaabaa inay marin u helaan qiima dhimista Stumari oo qayb ahaan, u adeegsata lacagaha Stumari inay ku bixiso qeyb ka mid ah ajuurada sharciga ah ee ay bixiyaan Macaamiisha Sharciga si Loogu Adeegsado La-taliyayaasha. Adeegsiga rasiidhyada noocaas ah macnaheedu maahan xidhiidh qareen iyo macmiil oo ka dhexeeya Stumari iyo La-taliyayaasha Adeegga halka kuuban loo adeegsado wixii biilal ah ee lagu bixiyo Macaamiisha Sharciga ah.
Xeerarka Dalbada waa in ay u adeegsadaan dhagaystayaasheeda loogu talagalay, ujeedadooda loogu talagalay, iyo hab sharci ah.
Koodhadhka xayeysiinta laguma qaadi karo, lama iibin karo lagumana wareejin karo qaab kasta, ama lama heli karo dadwaynaha oo dhan (ha lagu dhejiyo baraha bulshada ama haddii kale), haddii aan si cad loo oggol ahayn Stumari. Xeerarka Soo-saareyaashu ma laha qiimo lacageed waxayna dhici karaan ama Sturari ku curyaami karaan Stumari wakhti kasta, sabab kasta ha noqotee, ka hor isticmaalkaaga. Stumari wuxuu xaq u leeyahay inuu hakin karo ama ka jaro dhibcaha ama astaamaha kale ama faa'iidooyinka laga helo adeegsiga Koodhadhka xayeysiinta adiga ama isticmaale kasta oo kale haddii Stumari go’aaminayo ama uu aamminsan yahay in adeegsiga ama dib-u-furashada Koodhkii Xayeysiinta ay ku jirtay qalad, been abuur, sharci darro ah, ama ku xad-gudub ku ah shuruudaha Code Code lagu dabaqi karo.
Bixinta Adeegsiga ee Loogu Talagalay Isticmaalayaasha La-tashiga.
7.1 Ujrada Guusha ee Shaqada. Haddii ay dhacdo La-tashiga Isticmaalaha inuu aqbalo soo-jeedin shaqo (“Shaqaale Daboollan”) oo uu Sameeyay (midkasta, “Loo-shaqeeye Loo-shaqeeye”), ha ahaato mid aan xad lahayn ama go'an, inta lagu jiro ama sideed iyo toban (18) bilood gudahood. (mudada noocaas ah, "Muddada Bixiyaha La Daboolan") kadib La-tashiga Isticmaalaha ayaa bilaaba Shaqada ugu horeysa ee Isticmaalahaas (midkasta, “Bixinta Daboolida”), shuruudaha soo socda ayaa lagu dabaqi doonaa:
Loogu Talagalay Users.
La-taliye kastaa wuxuu oggol yahay in (1) haddii aad hesho Bixinta Daboolida, inaad si dhakhso ah ugu ogeysiin Stumari taariikhdaada ugu horeysa ee Shaqada Daboolida ("Taariikhda Bilowga") iyo ereyada furaha ah ee Bixinta Caymiska noocaas ah (oo si deg deg ah qoraal ugu sheeg Stumari qoraal ahaan waa in taarikhda Bilaabaysa ama shuruudo wax laga badalayo waqti kasta), (2) waa inaad Stumari u siisaa (a) nuqul ka mid ah Bixiyaha La Qariyey, ama (b) ku fuliso dukumintiga adiga, loo shaqeeyaha iyo Stumari oo sheegaya qodobka shuruudaha shaqaalaynta, oo ay ku jiraan, iyo waxyaabo kale, Taariikhda Bilaabida iyo magdhowga, si dhakhso leh markii la saxeexo warqad ku siineysa shaqo u dhaxaysa adiga iyo loo shaqeeyaha ("Taariikhda Dhaqangalka"), sida ku qoran qoraal Stumari, iyo (3) adiga waxay si dhakhso leh ugu ogeysiineysaa Stumari qoraal ka dib markay shaqada kaa joojiso shaqaale ahaan haddii (a) Loo-shaqeeye Adeegsade uu joojiyo Shaqadaada daboolan iyadoo lagu saleynayo wax qabad aan fiicnayn sagaashan (90) maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda Shaqo-helistaada Kooban. laga bilaabo, ama (b) aad si tabaruc ah u joojiso Shaqadaada Daboolida sagaashan (90) maalmood gudahood taariikhda taarikhdaada Shaqada la daboolay ay bilaabatay. Dhacdada ka hor Taariikhda Bilaabida, ama adiga ama loo shaqeeyaha waxaad dooratay inaadan bilaabin xiriirka shaqada ee ay ka fekerayaan Hay'ada Lacag La'aanta ah, waa inaad si dhakhso leh ugu ogeysiisaa Stumari qoraal ahaan.
Loo shaqeeyaha Loo-shaqeeyaha.
Markuu lataliye Adeeggu aqbalo bixiyahaaga daboolan, waxaad ogolaatay inaad bixiso lacagta guusha Stumari (midkasta, “Success Fee”) oo u dhiganta boqolkiiba inta soo socota ee mushaharka lataliyaha Adeegbixiyaha ee lagu qeexay Bixinta Daboolida (Qeybta La-tashiga "Base") Mushaharka ”, kaas oo lacagta lagu bixin doono ugu dambayn soddon (30) maalmood kadib taarikhda Bilowga ama haddii kale si waafaqsan jumlada ugu horeysa ee Qeybta 13.b. iyo Qeybta 13.d. halkan:
Haddii Taarikhda Bilaabashadu ay dhacdo ama ka hor tirada soo socota ee maalmaha ka dambeeya bilowga bilawga La-Taliyaha Loo-shaqeeyaha-Adeeg-qaataha Isugeynta Mushaharka Saldhigga Mushaharka
1-182 maalmood 15%
183-365 maalmood 10%
366-550 maalmood 5%
≥ 551 maalmood 0%
Adigoo aqbalaya shuruudahan Isticmaalka, Loo shaqeeyaha wuxuu oggolaanayaa in Stumari loo oggolaaday inuu si dhakhso leh ugu soo dallaco koontada loo-shaqeeyaha ee dhammaan kharashyada Guusha ee la bixiyo oo laga bixiyo Stumari halkaan isla markaana aan loo baahneyn ogeysiis ama oggolaansho dheeraad ah.
7.2 Qodobbada Ujrada ah ee Guusha.
Si kastaba ha noqotee sida kor ku xusan, haddii ay dhacdo Khilaafka Guusha, haddii Loo-shaqeeyaha Isticmaalaan uu ku caddeyn karo in Loo-shaqeeyaha Isticmaalaha uu leeyahay Hab-socod Firfircoon (sida hoos lagu qeexay) la-tashiga Isticmaalaha kahor intaysan isticmaalin Websaydhka Stumari iyo / ama Adeegga (tusaale ahaan, La Taliyaha La-tashiga hore u bilaabey howsha wareysiga ee loo shaqeeyaha loo shaqeeyaha oo hanaankaas oo kale lama joojin, ama loo shaqeeyaha wuxuu ka helay resumeyga la-tashiga resume ka socda hay'ad shaqo ama maamule oo tixgelin firfircoon ayuu siiyaa loo shaqeeyaha), loo shaqeeyaha Loo-shaqeeyuhu wuxuu noqon karaa waa laga dhaafay bixinta Mushaharka Guusha. Si kastaba ha noqotee, go'aanka ugu dambeeya ee ku saabsan in Mushaharka Guusha uu ku leeyahay Loo-shaqeeyaha Isticmaalaha ah ee loogu talagalay Soo-Bandhiga Daahsoon ee la aqbalay waxay noqon doontaa go'aanka kaliya ee Stumari. Ujeeddooyinka halkan laga joogo, “Habsocodka Firfircoon” waxaa loola jeedaa xiriir joogto ah oo toos ah, is-dhexgal is dhexgal ah, shaqo qorid firfircoon ama la shaqaaleysiinayo duruufo halkaas oo go'aan ah in murashax la hakiyo ama la diido aan la sameyn, seddexda (3) bilood kahor isticmaalka websaydhka iyo / ama Adeegyada loogu talo galay Adeeg-bixiye La-taliye oo ku jira nidaamka dabagalka Codsadaha Codsadaha Loo-shaqeeyaha ama ay soo gudbiyeen hay'ad shaqaalaysiinaysa.
HADDII AAD U ISTICMAAL U ISTICMAALO Adeegsade kaas oo adeegsanaya Websaydhka iyo / ama Adeegga, Waad ku raacsan tahay qodobbadan Mushaharka Guusha. Haddii aadan ku raacsaneyn mid ka mid ah qodobbadan, fadlan si dhakhso leh u jooji koontadaada oo jooji adeegsiga Websaydhka iyo Adeegyada AQOONSIGAAGA INAAD LACAG SI UGU JOOJIYO KHATARTA KHATARTA KHATARTA KHATARTA AMA U BILAASH EE SHURUUDAHA AMAAHAN. Haddii Loo-shaqeeyaha Isticmaalo uu wareejiyo Boggeena iyo / ama Adeegyada kadib markay ogaadaan Adeeg La-taliye iyada oo loo maro Boggayaga iyo / ama Adeegyada oo kadib shaqaaleysiinayo La-Taliyaha La-tashiga, Loo shaqeeyaha Loo-shaqeeyaha waxaa lagu soo dallaci doonaa ujro guul u dhiganta 25% Mushaharka Aasaaska ah ee La-Taliyaha Isticmaalaha iyo Stumari ayaa kaligood joojin kara koontada Stumari ee Loo-shaqeeyaha.
7.3 Lacag celin.
Haddii (a) Loo-shaqeeyaha Loo-shaqeeyaha uu shaqaaleysiinayo La-taliye Adeeg oo joojiyo shaqa La-tashiga Macaamiisha oo ku saleysan waxqabadka aan qancin gudaha sagaashan (90) maalmood ee Taarikhda Bilowga, (b) La-taliyaha Adeeg-bixiyuhu si iskiis ah u joojinayaa shaqadiisa sagaashan (90) maalmood gudahood ee Taariikhda Bilaabashada, ama (c) La-tashiga Macaamiil ma bilaabayo shaqo maxaa yeelay midkoodna Loo-shaqeeyaha ama Lataliyaha Adeeggu wuxuu doortaa inuusan bilaabin xiriirka xiriirka ee lagu eegay Deeq Bixiyaha (mid kasta, "Dhacdad Joogsi ah"), marka la helo iyo qoraal caddeyn ah Macluumaadka noocaas ah, Stumari wuxuu si buuxda ugu celin doonaa loo-shaqeeyaha Adeegga U-shaqaynta Guusha ee la xidhiidha joojinta lataliyaha Adeeg-bixiyeyaasha.
Mawduuca Saddexaad. Waxaa jiri kara waxyaabo ka socda dhinacyada saddexaad websaydhka Stumari, sida cinwaanada blogga ay qoreen isticmaaleyaasha kale ama xiriiriyeyaasha bogagga kale. Sababta oo ah ma xakamayn karno waxyaabahaas, mas'uul kama nihin waxaas ama websaydhada waxyaabaha ku xirnaan kara.
Helitaanka Qeybaha Seddexaad. Adigoo adeegsanaya Adeegga, waxaad awoodi doontaa inaad marin u hesho Waxyaabaha ay ka tirsan yihiin ama ka soo jeedaan qolo saddexaad ("Waxyaabaha Kooxda saddexaad"). Adeegsigaaga Adeeggu waa oggolaansho Stumari inuu kuu soo bandhigo Maaddadan. Waad qiraysaa mas'uuliyadaha oo dhan, oo aad u qaadataa halista aad u leedahay, isticmaalkaaga waxyaabaha ku jira Qaybta Seddexaad.
Ma Jiro Masuuliyad Ku Saabsan Qaybta Seddexaad. Iyada oo qayb ka ah Adeegga, Stumari ayaa laga yaabaa inay ku siiso xiriiriyeyaal ku habboon bogga internetka (yada) saddexaad iyo sidoo kale qaabab kale oo ka kooban Qeybta Seddexaad. Xiriirimahaan waxaa loo soo bandhigayaa si xushmad leh macaamiisha Adeegga. Annagu awood uma lihin xakamaynta websaydhayada saddexaad ama waxa ku jira ama dallacsiinta, agabka, macluumaadka, alaabada ama adeegyada laga heli karo iyaga. Markii aan ku xirno waxyaabaha noocaas ah, ma mataleyno ama ma muujineyso inaan qaadanno ama oggolaaneynno, mas'uulna kama lihin, saxnaanta ama isku halleynta fikradaha, talo, ama bayaan ay soo saareen dhinacyada aan ka aheyn Stumari. Annagu mas'uul kama lihin wax kasta oo Seddexaad oo ah Ka-helleheena websaydhka ah. Haddii aad go'aansato inaad ka baxdid Websaydhka oo aad gasho Qodobka Seddexaad ee Maqaalka ah, waxaad sidaas ugu sameyneysaa halis adiga kuu gaar ah waana inaad ogaataa in shuruucdayada iyo siyaasadeena aysan hadda xukumin. Waa inaad dib u eegto shuruudaha iyo xeerarka lagu dabaqi karo, oo ay ku jiraan asturnaanta iyo hababka xog aruurinta, ee wax walboo ay ka kooban tahay
Looma Ogolaansho Si Loo Isticmaalo Qodobka Seddexaad. Heshiiskani awood kuu siineynin inaad qaybiso, si fagaare ah u muujiso, si fagaare ah u bandhigto, u sameyso, wax ka beddesho, ama haddii kale u adeegso waxkastoo dhinac saddexaad ah marka laga reebo sida uu oggol yahay shuruudaha iyo shuruudaha Stumari.
Xad-gudubka Sharciga iyo Siyaasadda DMCA. Haddii aad aamminsan tahay in walxaha ku yaal ama ku xiran Stumari ay jebinayso xuquuqdaada daabacan, fadlan ogeysii Stumari iyada oo la raacayo Xeerka Xuquuqda Xuquuqda Milyaniga ee Digital Millennium.
Joojinta Xisaabaadka Ku celcelinta Stumari waxay xushmeyneysaa xuquuqda hantida aqooneed ee dadka kale waxayna codsataa in Isticmaalayaashu sidaas oo kale sameeyaan. Iyada oo la raacayo 17 USC 512 (i) ee Sharciga Xuquuqda Mareykanka, waxaan joojineynaa marin u helka Isticmaalaha iyo Isticmaalka Websaydhada, duruufaha ku habboon, adeegsadaha waxaa loo go'aaminayaa inuu noqdo ku xad-gudub ku soo xadgudbi xuquuqda daabacan ama xuquuqda kale ee hantida caqliga ah. Stumari ama kuwa kale. Waxaan joojin karnaa marin u helida kaqeyb galayaasha ama adeegsadayaasha la helo si isdaba joog ah si ay u bixiyaan ama u dhajisaan waxyaabaha saddexaad ee ilaaliya iyada oo aan loo baahneyn xuquuqaha iyo rukhsadaha.
Ogeysiisyada Qaadashada DMCA. Haddii aad tahay milkiilaha xuquuqda daabacaada ama wakiilka milkiilaha xuquuqda daabacaada oo aad aaminsanaato, in si kasta oo agab ah oo lagu bixiyo Adeeggu ku xad-gudbo xuquuqda aad u leedahay, waxaad u soo gudbin kartaa ogeysiis iyada oo la raacayo Sharciga Millennium-ka Dijitaalka ah (eeg 17 USC 512) (“DMCA”) adoo u diraya ogaysiis hoos u dhigid qaab sax ah oo qoraal ah wakiilka loogu talagalay Stumari ee loo xilsaaray daabacaada 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.
Jawaabta Ogeysiinta Ogeysiinta-DMCA. Haddii Stumari qaado ficil ka jawaabista ogeysiiska xadgudubka, waxay sameyn doontaa isku kalsooni wanaagsan si ay ula xiriirto kooxda sameysay waxyaabaha noocaas ah oo laga heli karo cinwaanka emaylkii ugu dambeeyay, haddii ay jiraan, ee ay siisay xisbigaas Stumari. Ogeysiis kasta oo jebinta DMCA waxaa loo gudbin karaa qolada ka dhigtay waxyaabaha la heli karo ama dhinac saddexaad sida ChillingEffects.org.
-Ogeysiisyada Haddii aad aamminsan tahay in Waxyaabaha Ay Ka-Soo-Sareen Macaamiisha ee laga saaray Websaydhka aysan jebinayn, ama aad leedahay oggolaanshaha milkiilaha xuquuqda daabacaadda, wakiilka milkiilaha xuquuqda daabacaadda, ama iyadoo la raacayo sharciga, in la dhajiyo oo la isticmaalo waxa aad soo gudbisay. Websaydhka, waxaad ugu diri kartaa ogeysiis qaab sax ah qaab qoraal ah wakiilka xuquuqda daabaca ee Stumari adoo adeegsanaya macluumaadka xiriirka kor ku xusan.
Jawaab-celinta ogeysiisyada DMCA. Haddii ogeysiiska diidmada ah uu helo wakiilka xuquuqda daabacaadda Stumari, Stumari wuxuu u diri karaa nuqul ka mid ah ogeysiiska ogeysiiska qeybta ashtakada asalka ah ee ku wargalinaysa qofkaas inay dib ugu soo celin karto waxyaabaha laga saaray 10 maalmood oo shaqo gudahood. Ilaa uu mulkiilaha xuquuq lihi uu fayl gareeyo tallaabo maxkamad ka soo saareyso bixiyaha waxyaabaha ku jira, xubin ama isticmaale, waxyaabaha laga saaray waxaa dib loogu soo celin doonaa Websaydhka 10 illaa 14 maalmood shaqo kadib helista ogeysiiska-ogeysiiska.
Ogeysiiska Hantida Maskaxda. Stumari waxay haysaa dhamaan lahaanshaha hantida aqooneed, oo ay ku jiraan xuquuqda daabacaada, shatiyadayada, iyo astaamahayaga ganacsiga.
Kala wareejin Stumari waxay haysaa lahaanshaha dhammaan xuquuqaha aqooneed ee aqooneed ee nooc kasta oo la xiriira Websaydhka iyo Adeegga, oo ay ku jiraan xuquuqda daabacaadda, rukhsadaha, calaamadaha ganacsiga iyo xuquuqaha kale ee lahaanshaha. Calaamadaha kale ee calaamadaha, astaamaha adeegga, garaafyada iyo astaamaha loo adeegsaday ee la xiriira Websaydhka iyo Adeeggu waxay noqon karaan calaamadaha calaamadaha dadka kale saddexaad. Heshiiskani annaga nooguma soo wareejinayo Stumari ama hanti aqooneed saddexaad saddexaad, iyo dhammaan xuquuqda, cinwaanka, iyo danta laga leeyahay iyo in hantida noocaas ahi sii jiri doonaan (sida dhinacyada u dhexeeya) oo keliya annaga ahaan. Waxaan ilaalinaynaa dhammaan xuquuqaha aan si cad loogu siinin sida ku xusan heshiiskan.
Gaar ahaan, Stumari, Stumari.com, iyo dhammaan calaamadaha kale ee calaamadaha muuqda, ayaa lagu muujiyaa, ama waxaa loo isticmaalaa Websaydhka ama iyadoo qayb ka mid ah Adeeggu ka diiwaan gashan yahay ama calaamadaha caamka ah ee calaamadaha ama calaamadaha adeegga ee Stumari, Inc. , la soo degsaday, la soo saaray, la isticmaalay, wax laga beddelay, ama loo qaybiyay sinaba iyada oo aan oggolaansho qoraal ah oo xagga hore ah laga helin Stumari, marka laga reebo inay tahay qayb muhiim ka ah nuqul kasta oo la oggolaaday oo ka kooban Agabkan.
Isgaarsiinta emaylka. Waxaan u isticmaalnaa e-mayl iyo qaab elektiroonig ah si aan ula xiriirno adeegsadeyaashayada.
Isgaarsiinta elektaroonigga ah ayaa loo baahan yahay. Ujeeddooyin qandaraas ahaan, adiga (i) oggolaanshaha inaad ka hesho isgaarsiinta Stumari qaab elektiroonig ah adoo adeegsanaya cinwaanka emaylka aad soo gudbisay ama Adeegga; iyo (ii) oggolaadaan in dhammaan Shuruudda Adeegga, heshiisyada, ogaysiiska, shaacinta, iyo isgaarsiinta kale ee Stumari ay ku siiso elektaroonig ahaan ay ku qanciso shuruud kasta oo xagga sharciga ah oo isgaarsiinta noocan ah ay qancin doonto haddii ay ahaan lahayd qoraal. Qeybtaani ma saameynayso xuquuqahaaga aan laga leexin karin.
Ogeysiiska Sharciga ah ee Stumari waa inuu ku qornaadaa. Isgaarsiinta lagu sameeyo emaylka ama nidaamka dirinta khaaska ah ee Adeeggu ma noqon doono ogeysiis sharci ah Stumari ama mid kasta oo ka mid ah saraakiisheenna, shaqaalaheenna, wakiillada ama wakiillada xaalad kasta oo ogeysiis Stumari looga baahan yahay qandaraas ama sharci ama sharci kasta.
Joojinta. Waad baabi'in kartaa heshiiskan oo aad xiri kartaa koontadaada waqti kasta. Joojinta Adeegga Stumari ma joojineyso cilaaqaadka macmiilka ama waajibaadka.
Waad joojin kartaa heshiiskan. Haddii aad jeceshahay inaad joojiso heshiiskan ama koontadaada Adeeggan, waxaad si fudud uga joogsan kartaa isticmaalka Stumari. Hadaad jeceshahay inaad tirtirto xogta xisaabtaada isticmaale, fadlan kala xiriir Stumari info@Stumari.com. Waan hayn doonnaa waxaanna u isticmaali doonnaa macluumaadkaaga sida loogu baahan yahay si aan u hoggaansanno waajibaadkayaga sharciga ah, xallinta khilaafaadka, oo aan dhaqan-galno heshiisyadayada, laakiin aan ka hor-istaagno shuruudaha sharciga ah, waxaan tirtiri doonnaa macluumaadkaaga oo dhan 30 maalmood gudahood.
Stumari ayaa joojin kara heshiiskan. Stumari waxay joojin kartaa marin u helkaaga dhammaan ama qayb ka mid ah Websaydhka wakhti kasta, iyada oo sabab ama sabab la’aan ah, leh ama ogeysiis la'aan ah, si dhakhso leh u dhaqan gala.
Xiriirka udhaxeeya Qareenka iyo Joojinta Ka Waaritaanka Macaamilka. Joojinta xiriirkaaga Stumari ma saameynayso xiriirka aad la leedahay lataliye ama macmiil kasta oo aad ku sii haysatid Adeegga Stumari. Dhamaan waajibaadka sharci, qandaraas, iyo akhlaaqda, waajibaadka iyo waajibaadka ayaa ka badbaadaya joojinta xiriirka Stumari.
Shuruucda qaarkood ayaa la joojiyaa. Dhamaan qodobada Heshiiskan oo ay dabiici ahaan ku sii noolaan karaan joojinta waxay ka badbaadin doonaan joojinta, oo ay ku jiraan, iyada oo aan la xaddidneyn, qodobbada lahaanshaha, qaan-sheegashada dammaanad-qaadista, iska-caabinta iyo xaddidnaanta mas'uuliyadda.
Bixinta iyo Macaamilka.
Habka Bixinta Bixinta waxaa loo maarayn doonaa sida ku qeexan soo-jeedinta iyo / ama qaan-sheegashada oo ay ku heshiin doonaan Macmiilka Sharciga ah iyo Adeegsiga La-Taliyaha. Marka Shaqada (ama qayb ka mid ah sida horay loogu oggolaaday qoraal ahaan uu u qoran yahay Macmiilka Sharciga iyo La-Taliyaha La-tashiga) uu u calaamadeeyay inuu dhammaystiray La-Taliyaha La-tashiga, Stumari wuxuu ogeysiin doonaa Macaamilka Sharciga in Shaqada (ama qeybteeda sidii horay loogu heshiiyay qoraal ahaan ay u dirayaan macmiilka Sharciga iyo Adeegsiga La Taliyaha) waa mid dhameystiran. Macmiilku sharciga waa inuu bixiyaa inta lagu heshiiyey ama uu codsado isbeddelada. Haddii Macmiilku Sharciga uusan qaadin wax tallaabo ah 10 maalmood ka dib, Stumari wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dallaco kaarka amaahda ee Macaamiisha Sharciga ah, koontada bangiga, ama akoonkiisa PayPal lacag dhan oo ah lacagta lagu heshiiyey ama qaan-sheegashada aan la caddeyn, oo ay kujirto adeegga lagu dabaqi karo ama lagu socodsiin karo. ajuurada. Macmiilku Sharciga ayaa u soo diri kara muranka lacag bixinta info@Stumari.com haddii ay u hoggaansanto shuruudaha kale ee lagu dejiyey Qaybta 14 (Nidaamyada Khilaafaadka Khilaafaadka Adeegga Macmiilka).
Masuuliyada Bixinta. Adiga ayaa mas'uul ka ah dhammaan ajuurada, oo ay ku jiraan canshuuraha, adeegga, iyo khidmadaha socodsiinta, ee la xiriira isticmaalka Adeegga. Adigoo adeegsanaya Adeegga, waxaad ku raacsan tahay inaad ku siiso Adeeg Bixiyaha iyada oo loo marayo Stumari qadarka lagu oggolaaday Bixinta ama qaansheegadka aan la caddeyn, iyo khidmadaha la xiriira iyo khidmaddaha, ilaa aad ka murmin qaansheegta adoo u diraya info@Stumari.com oo addeeco shuruudaha kale ee lagu dejiyey Qaybta 15 (Nidaamyada Khilaafaadka Khilaafaadka Adeeg-Macmiilka Sharciga ah). Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad na siiso hab sax ah oo lacag bixin ah.
Mas’uuliyadda Stumari. Stumari wuxuu oggol yahay inuu kugu soo bandhigo qaansheeg buuxa ee khidmad kasta kahor bixinta kaarka deyntaada ama koontada PayPal. Stumari wuxuu oggol yahay inuu ku bixiyo La-Taliyaha La tacaali karo qaddarka la helay, adeegyo ka yar ama khidmooyinka socodsiinta, haddii ay jiraan.
Oggolaanshaha Bixinta. Adigoo oggolaanaya shuruudahan, waxaad Stumari siineysaa rukhsad uu kugu dallaco kaarka deynta faylkaaga, koontada PayPal, ama qaabab kale oo la oggolaaday oo ah bixinta khidmadaha aad Stumari u oggolaaneyso inuu qanco. Waxay kuxirantahay faahfaahintaada Bixinta, Stumari ayaa kugu dallaci kara hal mar ama qaab soo noqnoqota. Waxaad u oggolaaneysaa Stumari inuu kugu soo dallaco lacagta oo dhan ee lagaaga leeyahay Adeeg-bixiye kasta oo Adeeg ah, iyo sidoo kale wixii khidmad ah ee khusaysa iyo khidmadda. Ka fogaanshaha shaki, haddii ay dhacdo in tusaale ahaan Adeeg La-taliye keliya u adeegsado Adeegga inuu kugu dallaco adeegyada sharci ee aan ahayn kuwa mowduuca Bixinta, adoo ku ridaya kaarkaaga deynta ama koontadaada PayPal faylka Stumari. ama qeybiyahayaga lacagta seddexaad, waad qiraysaa oo oggoshahay in shuruudaha bixinta ee lagu qeexay Qeybta 12aad ay quseyn doonaan.
Hubinta Dammaanad Qaadashada La-Taliyaha Adeegsiga ee Xaddidan. Stumari wuxuu dammaanad ka qaadanayaa bixinta qaansheeg kasta ee La-caddeeye La-caddeeyey oo loogu talagalay dhammaystirka Shaqooyinka (ama qayb ka mid ah sidii horay loogu oggolaaday qoraal ahaan xagga Macmiilka Sharciga iyo Adeegsiga La-tashiga) Macaamiisha Sharciga ah ("Dammaanad-bixinta Lacagta Xaddidan" ee Stumari), iyadoo la raacayo shuruudaha iyo shuruudaha soo socda ("Shuruudaha Ballanqaadka Bixinta Xaddidan"):
Macmiilka Sharciga ayaa ku guuldareystay inuu qanciyo qaan-sheegashada La-tashiga Adeegga ee la Xaqiijiyay (qadarka dollar ee qaan-sheegashada noocan ah, "Lacagta Biilka Aan La Bixin") dhammaadka tobnaad (10aad) maalinta ka dambeysa biil-bixinta (taariikhdaas, " Taariikhda Lacag bixinta Macaamiisha ee Sharciga ah ”).
Adeegbixiyaha La Xaqiijiyay wuxuu Stumari u gudbiyey codsi qoraal ah ee Lacagta Biil Bixinta (i) gudaheeda kow iyo labaatan (21) maalin taariikheed, laga bilaabo maalinta isla maalinta ku xigta Taariikhda Bixinta Macaamiisha Sharciga ah (mudada noocaas ah, "Xaqiijinta Muddada Codsiga Codsiga La-tashiga Isticmaalaha ") iyo (ii) waxay bixiyaan faahfaahin faahfaahsan oo macquul ah iyo duruufaha shaqada, oo ay kujirto caqli gal kasta oo ay siisay Macmiilku sharci u leeyahay inuu ku guuldareysto inuu bixiyo lacagtaas iyo / ama caqli gal kasta oo qareenku uu ku fiicnaan karo. iimaanku wuxuu ka hadlayaa sababta macmiilku u diidayo inuu lacag bixiyo (sheegashada noocaas ah, "Codsiga Dammaanad Qaadashada Lacagta Xaddidan"). Ka gaabinta gudbinta Codsiga Dammaanad-qaadka Lacagta xadidan ee Muddada Codsiga La-tashiga Adeegga La Xaqiijiyay wuxuu ka koobnaan doonaa iska dhaafka joogtada ah ee La-Taliyaha Adeeggan ama xaqeeda ah inuu ka helo Lacagta Biil Bixinta ee qof kasta ama hay'ad kasta, oo ay kujirto Stumari iyo Macmiilka Sharciga. Ilaa xadka uu Stumari go’aaminayo go'aankeeda kali ahaaneed ee dhammaystiran ee ah inay ganacsi ahaan macquul tahay in la sameeyo, wuxuu ku sii wadi karaa dadaalkiisa uruurinta Macaamiisha Sharciga ah iyo haddii lagu guuleysto, Adeegga La-Hubinta La Xaqiijiyey wuxuu heli doonaa qaybtiisa / qaddarka lacagta la ururiyey, laga jaro wixii macquul ah ee Stumari ee jeebka laga qaado, iyadoo la raacayo 12.e ee kore.
Dhacdada uu isticmaalaha lataliyaha la xaqiijiyey soo gudbiyo Codsi dammaanad qaadid xadidan gudaha mudada sheegashada lataliye sheegashada isticmaale, iyo codsigani wuxuu kujiraa macluumaadka lagu qeexay faqradda 14.b. kor ku xusan, Stumari wuxuu isku dayi doonaa niyad wanaag inuu la shaqeeyo Macmiilka Sharciga ah iyo Adeegsiga La-Hubinta La Xaqiijiyay muddo ah illaa toddobo (7) maalmood taariikheed laga bilaabo taariikhda Codsiga Dammaanad-qaadista Xaddidan (muddadaas oo ah, "Lacagta Laxiriirta Khilaafaadka Khilaafaadka) Xilliga Dhex-dhexaadinta ”) si loo xalliyo arrinta oo mowduuca ku saabsan Codsiga Dammaanad-qaadista Bixinta Lacagta (" Arrinka Mushaharka laxiriira ee Bixinta Lacagta "). Haddii ay dhacdo in Mushaharka la Xalliyay Mushkiladdu si guul leh loogu xalliyo Xilliga Khilaafaadka Khilaafaadka Mushaharka ah, mid kasta oo ka mid ah Macmiilka Sharciga ah, La-Taliyaha La-caddeeyey iyo, haddii ay quseyso, Stumari wuxuu qaadi doonaa tallaabooyinka lagu heshiiyay inuu ku fuliyo wixii lagu heshiiyay. qaraar.
Haddii ay dhacdo in Mushaharka Mushaharka laxiriira Mushaharka aan wali la xalin gabagabada Xilliga Khilaafaadka Khilaafaadka Mushaharka, ugu dambayn maalinta toddobaad (7aad) taariikhda ka dambaysa dhammaadka xilliga Khilaafaadka ee Khilaafka Mushaharka ah ( taariikhda go'aan noocan oo kale ah waxaa loogula socodsiiyaa qoraal ahaan Macmiilka Sharciga iyo Lataliyaha La Xaqiijiyay, "Stumari Disputed-Consunt Taariikhda Go'aanka"), Stumari wuxuu go'aan ka gaari doonaa go'aankiisa kaligiis ah (Go'aanka Khilaafaadka Stumari "), oo ku saleysan Macluumaadka markaa ay bixiyeen Adeeg La-Taliyaha La Xaqiijiyay iyo, haddii la bixiyo, Macmiilka Sharciga, in haddii nooca iyo tayada adeegyada sharciga ee la bixiyo ee la xiriira shaqada la xiriira ay yihiin kuwo la jaan-qaadaya heerarka warshadaha, qodobbada Ikhtiyaarka la xiriira iyo Shuruudahan iyo Xaaladaha. Haddii Stumari go’aansado Arrinka la-Bixiyay Bixinta Lacagta iyadoo la door bidaayo Adeeg La-Taliyaha La Xaqiijiyay, Stumari wuxuu u soo diri doonaa Lacagta Biilka La Bixiyay ee Loogu Talagalay Adeegsiga La-tashiga La Xaqiijiyay toddobo (7) maalmood gudahood ka dib Taariikhda Go'aaminta Khilaafaadka Stumari iyo Taariikhda Go'aaminta La-xisaabinta waxaa loo qaadan doonaa in loo xilsaaray dhammaan xuquuqdiisa ama xuquuqdeeda iyada oo laxiriirta Mushaharka laxiriira Mushaharka Stumari. Iyada oo aan loo eegin wax kasta oo lagu sheegay halkan ama si ka soo horjeedda, xaddiga doolar ee la raadsaday ee hoosta Qaybta 14 kama badnaan doono qadarka markii hore lagu heshiiyay ee u dhexeeyey Macmiilka Sharciga ah iyo Adeegsiga La-Taliyaha La Xaqiijiyay ee la xidhiidha shaqada ama qaddarka ku xiga ee lagu oggolaaday warqad hawlgal saxeexan ama mid kale heshiis qoraal ah oo u dhexeeya labada dhinac, iyo dhacdo kasta oo ka dambaysa weligeed kama badnaan doonto $ 5,000 wadarta guud ee qaan-sheegyada aan la bixin oo uu u diray Adeegga La-tashiga ee Xaqiijinaya Macaamiilka Sharciga.
Haddii Stumari go’aansado Arrinka laxiriirta Khilaafaadka ee Macaamiisha Sharciga, Macmiilka Sharciga ah kuma qasbanaan doono inuu ku bixiyo Lacagta Biilka aan la Bixin ee Adeegsiga La-Hubinta La Xaqiijiyay waxaana loo qaadanayaa inuu u xilsaaray dhammaan xuquuqdiisa ama xuquuqdeeda. iyadoo la tixraacayo Mushaharka laxiriira Khilaafaadka Mushaarka Stumari iyo sidoo kale Taariikhda Go'aaminta Khilaafaadka Stumari. Dhacdada noocaas ah, Adeegga La-Hubinta La Xaqiijiyay waa in (i) loo qaataa inuu ka tanaasulay xuquuqdiisa ama xuquuqdeedii ay ku raadsan lahayd qaddarka nooca ah ee Macaamiilka Sharciga, iyo (ii) waxay xaq u leeyihiin inay bilaabaan dhageysiga gar-qaadidda iyada oo la tixraacayo Lacagta Biilka La Bixiyay ee la Xisaabtamayo Stumari taasoo u dhiganta dacwadaha lagu sheegay qaybta 21d. halkan (Xalinta Khilaafaadka) adoo siinaya Stumari ogeysiis qoraal ah ee ku saabsan howlaheeda ama xuquuqdeeda xuquuqdan oo kale toban (10) maalmood gudahood ka dib dhammaadka Taariikhda Go'aaminta Khilaafaadka Stumari (Xilligaas oo kale, "Waqtiga Doorashada Khilaafaadka Khilaafaadka Khilaafaadka") ). Haddii ay dhacdo in Hubinta La-Taliyaha La Hubiyay uusan u isticmaalin xuquuqdiisa / eeda xaqqa ay u leedahay in ay bilawdo dacwadaha gar-qaadista inta lagu gudajiro Waqtiga Doorashada Khilaafaadka Khilaafaadka, isaga ama iyada waxaa loo qaadanayaa in ay si joogto ah uga tanaasuleen xuquuqdiisa / keeda si ay u bixiso Lacagta Biilka La Bixiyay.
Stumari miyaa ogaataa in kaarka amaahda ee Macaamiisha Sharciga ah, koontada PayPal, ama qaabab kale oo la oggol yahay bixinta aysan hadda ansax ahayn, ama Stumari ay ogaato in Macmiil Sharci yahay, sabab aan ansax ahayn, ama uusan dooneynin ama uusan awoodin inuu bixiyo lacagta Shaqada, ama shaqo kale ama qaan-sheegad kale oo aan la bixin oo ku saabsan Stumari, Stumari wuxuu ogeysiin doonaa La-Taliyaha La-Hubiyay ee Macaamiisha Sharciga ah ee loo adeegsado / Isticmaalayaasha arrinta la xiriirta bixinta (halkan “Ogeysiiska”). Dhammaan adeegyada ay qabtaan Adeeg-bixiyaha La Xaqiijiyay ka hor Ogeysiinta waxaa ku waajib ah “Dammaanad-bixinta Lacagta Xaddidan,” in kastoo adeegyada oo dhan oo uu sameeyo Kuxiriyaha La-Hubsaday ee ku xusan Ogeysiiska ma noqon doono "Dammaanad-bixinta Lacagta Xaddidan." Haddii Isticmaalaha La-Hubinta ee La Xaqiijiyay inuu u soo gudbiyo qaansheegta Macaamiisha Sharciga ee adeegyada la sameeyo ee ku xigta Ogeysiiska, Stumari wuxuu wali ku dadaalayaa sidii uu u ururin lahaa bixinta adeegyadaas uu fuliyay Adeegga La-tashiga La Xaqiijiyay.
Habraacyada La-tashiga Macaamiil ee Sharciga ah ee Habraacyada Khilaafaadka Khilaafaadka Adeegsiga. Haddii ay dhacdo in Macaamiil Sharci ahi leeyahay aaminaad wanaagsan in dabeecadda ama tayada adeegyada sharciga ee uu bixiyo Adeeg-bixiye La-caddeeyay oo la xidhiidha shaqooyinka la xidhiidha aan waafaqsanayn heerarka warshadaha ama qodobbada Ikhtiyaarka la xiriira ama Shuruudaan iyo Shuruudaha, ama qadarka qaansheegadka adeegyada sharciga ee uu bixiyo Adeeg La-Taliyaha La-tacaabista kuma eka Baananka noocaas ah (arrinta, “Arrin la Xalliyo Adeegyada la Xiriira”), isaga ama iyadu waa loo oggol yahay inuu diido bixinta wixii lacag ah ee lagu muransan yahay oo ah Mawduuca ay ka mid tahay ("Lacagta Lacagta La Bixiyay"), iyadoo la raacayo shuruudaha iyo shuruudaha soo socda ("Xaaladaha Lacagta Bixinta"):
Toban (10) maalmood gudahood taariikhda taariikhda qaansheegashada laxiriirta (mudadaas oo kale, "Xilliga Ogeysiiska Khilaafka Macmiilka Sharciga ah"), Macmiilka Sharciga ah wuxuu siin doonaa ogeysiis qoraal ah Stumari isagoo si faahfaahsan u faahfaahinaya xaqiiqada iyo duruufaha jira ee arrimaha laxiriira Adeegyada laxiriira (midkasta, "Ogeysiiska Khilaafka Adeegyada Laxiriira"). Ku guuldaraysiga Macmiilka Sharciga ah inuu soo gudbiyo Ogeysiiska Khilaafka Adeegyada ee Dhexmara Ogeysiiska Khilaafka Macmiilka Sharci ahaanta waxaa ka mid ah ka dhaafida joogtada ah ee Macaamiil Sharciyeedkiisa ama xuquuqdeeda ah inuu ka doodo Lacagta Bixinta, taas oo lacagta lagu dallaci doono faylka faylka ee Macmiilka Sharciga ah. kaarka deynta, koontada PayPal, ama habab kale oo la ansixiyay oo lacag bixinta iyadoo la raacayo Qeybta 13.d. Shuruudaha Adeeggan.
Haddii ay dhacdo in Macaamilku Sharciga u soo gudbiyo Ogeysiiska Khilaafaadka Adeegyada la Xiriira ee Muddada Ogeysiiska Khilaafka Macaamiil ee Sharciga, iyo codsigan oo kale waxaa ku jira macluumaadka lagu qeexay faqradda 15.a. kor ku xusan, Stumari wuxuu isku dayi doonaa niyad wanaag inuu la shaqeeyo Macmiilka Sharciga ah iyo Adeegsiga La-Hubinta La Xaqiijiyey muddo ah illaa iyo shan iyo toban (15) maalmood taariikheed laga bilaabo taariikhda Ogeysiiska Khilaafaadka Adeegyada la Xiriira (mudadaas oo kale, "Adeegyada La Xiriira Falanqeynta Adeegyada Xilliga Dhex dhexaadinta ee Arrimaha ”) si loo xalliyo Arrinka Khilaafka Adeegyada laxiriira. Haddii ay dhacdo in Arrinta Khilaafaadka la Xiriira Adeegyada si guul leh loogu xalliyo Xilliga Dhex-dhexaadinta ee Khilaafaadka Adeegga, mid kasta oo ka mid ah Macmiilka Sharciga ah, La-Taliyaha La-caddeeyay iyo, haddii ay quseyso, Stumari wuxuu qaadi doonaa tallaabooyinka lagu heshiiyay inuu ku fuliyo wixii lagu heshiiyay. qaraar.
Haddii ay dhacdo in Arrinta Khilaafaadka Adeegyada la Xiriira Adeegyada aan wali la xalinin gabagabada Wakhtiga Khilaafaadka ee Adeegyada Laxiriira, ugu dambayn afar iyo tobnaad (14aad) maalin taariikheed kadib dhamaadka Wakhtiga Khilaafaadka Khilaafaadka ee Adeegyada, Stumari waxay go'aan ka gaari doontaa go'aankeeda kali ahaaneed iyo mid buuxda ('' Stumari Adeegyada Laxiriirta Khilaafaadka Mawduucyada Muhiimka ah '), waxaana lagu salaynayaa macluumaadka markaa ay siiyeen Macmiilka Sharciga iyo Adeegsiga La-Taliyaha La Xaqiijiyay, in ay tahay nooca iyo tayada adeegyada sharciga. loo bixiyo shaqada la xiriirta Job kaas oo mowduuca Mawduucyada Khilaafaadka la Xiriira Adeegyada ay la jaanqaadeen heerarka warshadaha, qodobbada Iibsiga la xiriira iyo Shuruudahan iyo Shuruudahan. Haddii Stumari uu go’aansado arrinta laxiriirta Khilaafaadka Adeegyada ee uu doorbidayo La-Taliyaha La-caddeyey, Macaamiisha Sharciga waxaa waajib ku ah inay ku bixiso Lacagta La-Soo-Bixinta Lacagta La-Taliyaha Macaamiisha noocaas ah toddobada (7) maalin taariikheed ka dib taariikhda taasoo ah Macmiilka Sharciga waxaa lagu ogeysiiyaa qoraal ahaan Go'aanka Khilaafka laxiriira Adeegyada Stumari (“Ogeysiiska Go'aanka ee ku saabsan Khilaafaadka Adeegyada Stumari”). Haddii ay dhacdo in Macmiilku Sharciyeedku ku guul darreysto inuu waqtigiisa bixiyo, Stumari wuxuu u celin doonaa Lacagta Bixinta Lacagta Macaamiisha La-tashiga ee loo xilsaari doono xuquuqdiisa / ama magaceeda dib-u-bixinta lacagtan oo kale Stumari oo laga yaabo, go'aankeeda kaliya, in lagu socodsiinayo bixinta ilaa Qaybta 13.d iyo / ama loo doorto in lagu sii wado xuquuqdeeda iyo daaweyntiisa dhanka Macaamiisha Sharciga ah.
Haddii Stumari uu go'aansado arrimaha laxiriira Khilaafaadka Adeegyada isagoo tixgelinaya Macmiilka Sharciga ah, Macmiilka Sharciga ah laguma qasbi doono inuu ku bixiyo Lacagta La Kordhiyay La-Taliyaha La-caddeeyay waxaana loo qaadan doonaa inuu u xilsaaray dhammaan xuquuqdiisa / keeda iyadoo la tixraacayo Arrimihii Khilaafka laxiriiray ee Stumari. Dhacdada noocaas ah, Adeegga La-Hubinta La Xaqiijiyay waa in (i) loo qaataa inuu ka tanaasulay xuquuqdiisa ama xuquuqdeeda si ay uga raadiso qadarkaas macmiilka Sharciga ah, iyo (ii) waxay xaq u leeyihiin inay bilaabaan dhageysiga gar-qaadidda laxiriira iyadoo la tixraacayo Lacagta La Soo Bandhigo Stumari taasoo u dhiganta dacwadaha lagu sheegay qaybta 21d. halkan (Xalinta Khilaafaadka) adoo siinaya Stumari ogeysiis qoraal ah ee ku saabsan howlaheeda ama xuquuqdeeda xuquuqdan oo kale toban (10) maalmood gudahood taariikhda taariiqda Ogeysiiska Go'aanka ee Khilaafaadka Adeegyada laxiriira (mudadaas, "Waqtiga Doorashada Khilaafaadka laxiriira Adeegyada laxiriira. ”). Haddii ay dhacdo in Adeegga La-Hubiyay uusan u isticmaalin xuquuqdiisa / keeda ama ay bilaabi karto dacwadaha gar-qaadista inta lagu gudajiro Waqtiga Doorashadda Adeegyada la Xiriira Khilaafaadka, isaga ama iyadu waxaa loo qaadanayaa inuu si joogto ah uga tanaasulay xuquuqdiisa / keeda si ay u bixiyaan Lacagta La Kordhinayo Lacagta. .
Haddii ay dhacdo in Hubiyaha La-tashiga La Xaqiijiyay iyo Macaamiil Sharci ay labaduba waqtigooda uga soocan yihiin xuquuqda loo dejiyey Qaybta 14 iyo Qaybta 15, habraacyada lagu qeexay Qaybta 15 waxay ka horreeyaan dacwadda lagu qeexay Qaybta 14 iyo Adeegsiga La Xaqiijiyay Lataliyuhu wuxuu oggol yahay inuu si joogto ah uga tanaasulo xuquuqdiisa / eeda xuquuqdeeda ama xuquuqaheeda ku xusan Qaybta 13 ee la xiriirta xaqiiqooyinka iyo duruufaha ku hoos jira Bixinta Mushkiladaha la Xiriira. Nidaamyada lagu qeexay Qeybta 15-aad waxaa loogu gudbin doonaa halkan sida Habka Xalinta Khilaafaadka ee Beddelka ah ”.
Diidmada Warqadaha. Waxaan u fidinnaa howlaheenna sidii hore, oo annaguna ma sameyno ballanqaad ama dammaanad qaad ku saabsan adeeggan. Fadlan u akhri qaybtan si taxaddar leh; waa inaad fahanto waxa laga filan karo.
Stumari waxay bixisaa Websaydhka iyo Adeegga “sidii la rabay,” iyada oo aan la helin dammaanad nooc kasta ah. Iyada oo aan la xadidin qodobada kor ku xusan, Stumari wuxuu si cad u siidaayaa dammaanadaha oo dhan, ha ahaato mid muujineysa, sharci ahaan ama sharci ahaan, ku saabsan Websaydhka iyo Adeegga oo ay ku jiraan, iyadoon la xadidin, wax dammaanad ah oo laga ganacsado, taam ahaansho ujeedo gaar ah, cinwaan, amni, saxnaan iyo ku-xadgudbid la'aan.
Gaar ahaan, Stumari kama dhigeyso wax matalin ama dammaanad ah in macluumaadka aan ku siino ama lagu bixiyo Adeeggu inuu yahay mid sax ah, la isku halleyn karo ama sax ah; in Adeeggu buuxi doono shuruudahaaga; in Adeeggu heli doono wakhti kasta ama goob gaar ah, in Adeeggu ku shaqeyn doono qaab aan kala go 'lahayn ama amni u sugnaanayo; wixii cillad ama qalad ah waa la sixi doonaa; ama in Adeeggu xor ka yahay fayras ama waxyaabo kale oo waxyeello leh. Waxaad u qaadanaysaa masuuliyad buuxda iyo halista lumista ka dhalata isticmaalka macluumaadkaaga, waxyaabaha aad ka kooban tahay ama shey kale oo aad ka heshay Adeeggan. Shuruucda qaar ayaa xaddidaya ama uma oggolaanayaan qaan-dhaafyada dammaanadda, sidaa darteed qodobkaan kuma quseyn karo adiga.
Xaddidaadda Mas'uuliyadda. Annagu mas'uul kama noqon doonno waxyeelada ama khasaaraha ka dhasha isticmaalkaaga adeegga ama ka soo baxa Heshiiskan. Fadlan u akhri qaybtan si taxaddar leh; waxay xadideyneysaa waajibaadkayaga adiga.
Ilaa inta uu oggol yahay sharciga lagu dabaqi karo, dhacdo kasta Stumari mas'uul kama aha adiga wixii khasaaro ah ee ka soo baxa, adeegsiga, ama xog kasta, ama wixii shil ah, aan toos ahayn, gaar ahaaneed, wixii cawaaqib xumo ama tusaale tusaale ah, si kastaba ha noqotee, natiijada ka dhalatay (i ) adeegsiga, shaacinta, ama soo bandhigida Waxyaabaha Ay Ku-Qoondaysan yihiin; (ii) adeegsigaaga ama karti-darrida adeegsiga Adeegga; (iii) Adeegga guud ahaan ama softiweeriyada ama nidaamyada adeegga u dhigaya in la helo; ama (iv) is dhex galka kale ee ku saabsan Stumari ama isticmaale kale oo Adeeg ah, ha ahaado mid ku saleysan dammaanad, qandaraas, jirdil (ay kujirto dayacaad) ama aragti kasta oo sharci ah, iyo in Stumari lagu wargaliyay suurtagalnimada waxyeeladaas, iyo xitaa haddii wax ka bedel lagu sameeyay heshiiskan lagu helo inuu ku guuldareystay ujeeddadiisa muhiimka ah. Stumari mas'uul kama aha wixii guuldarro ama dib u dhac ah sababo la xiriira arrimaha ka baxsan kontoroolkayaga macquulka ah. Shuruucda qaar ayaa xaddidaya ama uma oggolaanayaan mas'uuliyada mas'uuliyadda, sidaas darteedna qodobkaani kuma quseeyo adiga.
Ka-faa'iideystayaasha Seddexaad. La-taliyayaasha Adeegsadeyaasha waxaa loogu talagalay ka-faa'iideystayaasha saddexaad ee qaybtaan ka mid ah Shuruudaha Adeegsiga. Wixii macluumaad sharci ah ee lagu bixiyo Adeeggu waxaa loogu talagalay ujeedooyin macluumaad oo keliya. Stumari iyo hal-abuure kasta oo ka kooban Waxyaabaha Ay Ka-Soo-Sareen Macaamiisha Ka kooban Macluumaadka Sharciga ayaa sheegta dammaanad-qaadyada oo dhan, ha ahaato mid muujineysa ama muujinaysa, qaanuun ahaan ama haddii kale, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn dammaanad-qaadyada la taaban karo ee badeecad-iibinta, ku-xadgudubka xuquuqda saddexaad ee xuquuqda saddexaad, iyo taam ahaansho ujeedo gaar ah , ilaa inta ugu badan ee sharcigu oggol yahay. Dhacdo kasta Stumari ama lataliye isticmaale looma ciqaabi doono wixii waxyeelo ah (ay ka mid yihiin, iyada oo aan la xadidin, shilalka iyo waxyeelada ka dhalan karta, dhaawaca shaqsiyeed / geeri qalad ah, macaash lumay, ama waxyeelo ka dhasha xog lumis ama hakad la galiyo ganacsiga) taasoo ka dhalatay adeegsiga ama awood la’aanta isticmaalka Adeegga ama Waxyaabaha Uu Soo-Saaray Macaamiil, ha ahaato mid ku saleysan dammaanadda, qandaraaska, jirdilka, ama aragti kasta oo sharciyeed, iyo haddii Stumari ama ku-biiriyeha Waxyaabaha Ay Ka-Bixin Tahay Adeegga La-Talinayo suurtagalnimada waxyeelada noocaas ah. Stumari iyo kuwa wax ku darsada midkoodna ma ahan mid mas'uul ka ah dhaawac kasta oo qof ahaaneed, oo ay ku jirto geeri, taas oo ay sabab u tahay adeegsigaaga ama si xun u isticmaalida Adeegga ama Ka-soo-saare Macaamiil.
Siideyn iyo Bixin.
Waad oggolaatay in la caddeeyo oo aad ku hayso Stumari aan dhib lahayn kana soo horjeedo wax kasta iyo sheegashooyinka iyo kharashyada, oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka, ee ka imanaya isticmaalkaaga Websaydhka iyo Adeegga, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xadgudubkaaga Heshiiskan.
Haddii aad khilaaf ka dhexeyso mid ama in ka badan Users, waxaad Stumari ka sii deyneysaa sheegashooyinka, dalabyada iyo waxyeelada (dhabta ah iyo wixii ka dhasha) nooc kasta iyo dabeecadda, la yaqaan iyo wax aan la aqoon, kana soo baxa ama si kasta oo xiriir la leh khilaafaadka noocaas ah. Haddii aad degan tahay Kaliforniya, waxaad ka tanaasushay Sharciga Canshuuraha ee California §1542, kaasoo odhanaya: “Siidaynta guud looma kordhin karo sheegashada uusan deyn bixiyuhu uusan ogeyn ama uusan tuhunsaneyn inuu ku jiro maslaxadiisa waqtiga xukunka la siidaayo, haddii uu yaqaanay waa inuu si muuqata u saameeyay degitaankiisii ​​deyn-bixiye.
Wax ka badalida shuruudaha adeegsiga. Stumari waxay wax ka baddali kartaa heshiiskan waqti ka waqti, iyo Stumari kaligiis go'aankiisa. Waxaan u soo bandhigi doonnaa adeegsadeyaasha isbeddelka agab ee heshiiskan (i) anagoo ogeysiinno ogeysiiska cinwaanka e-maylka aasaasiga ah ee lagu qeexay akownkaaga, kaasoo dhaqsaha u dhaqan galaya marka la soo diro e-maylkan, iyo / ama (ii) iyada oo loo marayo Degelkayaga ugu yaraan 30 maalmood kahor isbedelka la dhaqan gelinayo adoo ogeysiiska ogeysiiska ku soo qoraya boggayaga bogga. Isbeddellada aan alaabada ahayn ee heshiiskan ayaa si dhakhso leh u dhaqan galaya. Waxaan ku dhiirigelinaynaa booqdayaasha inay si joogto ah u hubiyaan boggan wixii isbeddel ah ee ku yimaadda Heshiiskan. Adeegsigaaga joogtada ah ee Adeegga kadib taariikhda dhaqangalka ee nooca dib loo eegay ee heshiiskan ayaa ka dhigan aqbalaada shuruudaha.
Kaladuwan. Heshiiskan waxaa xukuma sharciga California. Adiga, iyo adiga keligaa, ayaa mas'uul ka ah wixii waajibaadyo ah ee aad ku oggolaato heshiiskaan. Haddii aan ku lug leennahay midow ama la iibsaday, waan wareejin karnaa Heshiiskan, illaa inta xuquuqdaada la dhowro. Waxaad ogolaan kartaa shuruudahan oo keliya haddii aad awood u leedahay inaad sameysato heshiis khasab ku ah gobolkaaga. Shuruudahan, oo ay ku jiraan Nidaamkayaga Khaaska ah, ayaa ah heshiiska dhameystiran ee inaga dhexeeya, shuruudo kalena aan la adeegsan.
Sharciga Xukunka. Marka laga reebo inta sharciga quseeya uu ku siinayo haddii kale, heshiiskan adiga iyo Stumari dhex mara iyo wixii marin u ah ama adeegsiga Websaydhka ama Adeeggu waxaa xukuma shuruucda federaalka ee Mareykanka iyo sharciyada Gobolka California, iyadoo aan loo eegin ku xadgudubka qodobbada sharciga. Adiga iyo Stumari waxaad ku heshiiseen inaad u gudbisaan awoodda gaarka ah iyo madasha maxkamadaha ku yaal Magaalada iyo Gobolka San Francisco, California, marka laga reebo sida hoos ku qoran Heshiiskan.
Kordhinta. Haddii qayb ka mid ah heshiiskan loo qabtay inuu yahay mid ansax ah ama aan la meelmarin karin, qaybtaas heshiiska waxaa loo dhisi doonaa inay ka tarjunto ujeeddada asalka ah ee dhinacyada. Qaybaha haray waxay ahaan doonaan kuwo shaqeynaya oo buuxa. Guul kasta oo ka timaadda dhinaca Stumari si loo meelmariyo qodob kasta oo heshiiskan ah looma tixgelin doono ka-dhaafitaan xuquuqdeena ku aaddan hirgelinta qodobkaas. Xuquuqdayada ku jirta Heshiiskan ayaa ka badbaadin doonta joojinta heshiis kasta.
Xaddidista Muddada Waxqabadka. Waxaad ku raacsan tahay in wixii fal ah ee la xiriira ama ka yimaada xiriirkaaga Stumari ay qasab tahay inuu ku bilowdo hal sano gudahood ka dib sababta ficilku. Haddii kale, sababta ficilkan oo kale si joogto ah ayaa loo mamnuucay.
Xalinta Khilaafaadka. Haddii khilaaf yimaado adiga iyo Stumari, waxaan jeclaan lahayn inaan ku siinno hab dhex-dhexaad ah oo qiimo-jaban oo lagu xalliyo muranka si dhakhso leh. Sidaa darteed, sheegasho kasta (marka laga reebo sheegashada xukun amar ama kaalmo caddaalad ah ama sheegashooyinka ku saabsan xuquuqda hantida aqooneed) ee hoos yimaada Heshiiskan, labada dhinacba waxay dooran karaan inay xalliyaan khilaaf kasta oo ka dhex dhaca Heshiiskan iyada oo loo marayo gar-qaadasho ku-saleysan aan muuqan. Qaybta dooranaysa gar-qaadida waa in ay ku bilaabataa iyada oo loo marayo hanaan xal kale oo khilaafaad khilaaf ah (“ADR”) oo ay labada dhinac ku heshiiyeen. Bixiyaha ADR iyo dhinacyada waa inay raacaan qawaaniinta soo socota: (a) gar-qaadida waxaa lagu sameyn doonaa, ikhtiyaarka qeybta raadinaya gargaarka, taleefan, khadka internetka, ama ku saleysan kaliya soo gudbinta qoraalka ah; (b) gar-qaadida kuma lug yeelan doontid muuqaal shaqsiyeed ee dhinacyada ama markhaatiyaasha mooyee haddii labada dhinac ay ku heshiiyeen mooyee; iyo (c) go'aan kasta oo ku saabsan abaalmarinta uu bixiyay garqaadaha waxaa lagu geyn karaa maxkamad kasta oo leh awood u leh.
Awood-Siin la'aan. Stumari wuxuu u xilsaari karaa ama u wakiili karaa Shuruudahan Isticmaalka iyo / ama Nidaamka Asturnaanta Stumari, gebi ahaanba ama qayb ahaan, qof kasta ama hay'ad waqti kasta iyadoo la haysto ama aan oggolaanshahaaga la helin. Ma wareejin kartid mana u wareejin kartid wax xuquuq ah ama waajibaad ah sida ku xusan Shuruudaha Isticmaalka ama Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyada oo aan oggolaanshaha hore ee qoran ee Stumari, iyo meeleyn kasta iyo rukhsad aan laguu fasaxin adiga ayaa been ah.
Cinwaanada Qaybta iyo Xirmooyinka Aan Xadhka-la'aanta ah. Inta heshiiska lagu jiro, qayb kasta waxaa ku jira cinwaanno iyo soo koobid kooban shuruudaha iyo shuruudaha soo socda. Cinwaanada qaybtani iyo soo koobidyada kooban sharci ahaan ma ahan kuwo waajib ku ah.
Heshiis dhameystiran. Shuruudahan Isticmaalka, oo ay weheliso Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee https://www.Stumari.com/privacypolicy, waxay matalaan qoraalka rasmiga ah ee dhameystiran ee u dhexeeya adiga iyo Stumari. Heshiiskani wuxuu ka hor imanayaa soo-jeedin kasta ama heshiis hore oo afka ah ama qoraal ah, iyo wixii kale ee xidhiidh ah ee idinka dhexeeya adiga iyo Stumari ee la xidhiidha mawduuca ku saabsan Heshiiskan. Heshiiskan waxaa lagu beddeli karaa oo keliya wax ka badal qoraal ah oo ay saxeexeen maamulaha Stumari idman, ama ku dhajinta Stumari ee nooca la beddelay.
Oggolaanshaha Heshiiska Waxaad wakiil ka tahay oo damaanad qaadeysaa in haddii aad tahay shaqsi, aad tahay da 'sharci ah si aad u sameysatid heshiis khasab ah; ama haddii aad iska diiwaangelineyso wakiil hay'ad ah, in laguu oggolaaday inaad gasho, oo aad ku xirato qeybta, Shuruudahan Adeegsiga oo aad iska diiwaangeliso Adeeggan.
Waad qiraysaa inaad aqrisay shuruudahan Isticmaalka, fahantid Shuruudaha Adeegsiga, waxaana kugu xiraya shuruudahan iyo shuruudahan.